Sukuvumela Iphulo Lakho Lokuthontsiza Libe Kukungcungcuthekiswa Kwamanzi aseTshayina | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 15, 2010 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 9, 2022 Lorraine Ibhola
Enye yezona ndlela zisebenzayo zokuhambisa abangaqhelekanga kwiRaving Fans kukusebenzisa iphulo "lokudriphu". Kule nkqubo uchonga iqela elikhethiweyo labantu elilingana nenani elithile labantu, okanye okungcono okwangoku, yabelana ngomdla ofanayo kwaye ubathumele imiyalezo. Le miyalezo ingaba yi-imeyile, Imeyile yelizwi, ileta ngqo, okanye ubuso ngobuso.
Umkhankaso osebenzayo ngokwenyani ubonelela ngolwazi olufanelekileyo kumthengi ekujoliswe kuye, uza rhoqo, kodwa ungacaphuki, kwaye uhambise ithemba kwisigqibo sokuthenga.
Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, ngaphezulu koosomashishini abanomdla okanye abathengisi bazama ukukhawulezisa inkqubo, ngokuthumela ulwazi oluninzi kakhulu, ngokukhawuleza kakhulu, okanye rhoqo. Isiphumo? Ngokuchanekileyo impendulo eyahlukileyo, njengoko ithemba lakho lingasileli ukuthenga kuphela, bakuxelela ukuba uhambe, umphelo!
Njengomthengisi we-imeyile, ndihlala ndinesigulana esihle, kodwa kutshanje, iRotpoint iphelile ukwamkela kwabo. Njani? Kulungile yaqala imsulwa ngokwaneleyo, ngeposikhadi, i-imeyile kunye nesithembiso simahla. Kwakukho nomnxeba apho ndabuza imibuzo embalwa. Phambi kokuba incoko iphele ndibaxelele ukuba akunakulindeleka ukuba ndisebenzise imveliso yabo kuba ndingumthengisi kwakhona Qha ga mshelwano kwaye kwakungekho sizathu sinyanzelekileyo sokuba nditshintshe.
Endaweni yokuthatha inhlonipho hayi, bandihambisa kwiqela elahluke ngokupheleleyo kwaye ndaba lithemba. Kwakukho iiposikhadi ezingakumbi, i-imeyile engakumbi kunye neminxeba emininzi. Njengokuba abantu babo abathengisayo baya becaphuka, befuna ukwazi ukuba kutheni ndingakhange ndilisebenzise ityala lam, ndikufumene kunzima kwaye kunzima ukuhlala ndichubekile. (Masijongane nayo, ndivela e-NY kwaye ngemini elungileyo kunzima ukuba ndihlale ndichubekile)
Ukuba ngendikhe ndacinga ngokuzama imveliso yabo, akunakufane kwenzeke ngoku. Sifunda ntoni? Ukuthengisa kakhulu ayisiyonto intle. Ukuba umntu uthi ayililo ithemba, mabaphume, baqhubeke. Amanzi anokuzonakalisa iintaba, ithontsi elinye ngexesha, kodwa ayizukuhambisa mntu ukuba athenge.
tags: ukuthontsizaIphulo lokuhambisaemail Marketingukuzenzekela ngokuzenzekelayo
Mar 15, 2010 ngo-7: 29 AM
Lorraine, iposi yakho indenze ndacinga ngombuzo ebendicinga ngawo mva nje. Leliphi ithuba elilungileyo (phakathi kwemiyalezo) elinokusetyenziswa kwiphulo le-imeyile ye-DRIP? Ngokukodwa ukuba unolwazi oluninzi lwemfundo onokuthi unikezele. Iintsuku ezi-2? Iintsuku ezi-3? Iveki?
Mar 15, 2010 ngo 8:30 PM
Umbuzo omhle uPatric,
Ndithanda ukushiya iveki phakathi, kodwa iyahluka ngokodidi, kunye nokuba abasebenzisi bakho babhalisela ntoni.
Umzekelo omkhulu yayiyiProBlogger iintsuku ezingama-31 zokubhloga ngcono. Yayiyinkqubo enkulu. Ndabhalisa ndisazi ukuba ndiza kufumana i-imeyile ngosuku ngeentsuku ze-31. Incinci ibininzi kakhulu. Ndawa ngasemva, kwaye andizange ndiphinde ndibuyele. Nangona ndigcine zonke ii-imeyile ezingama-31, andizange ndiphumelele isifundo se-15.
Emva kokuhamba ngeprogram yakhe, ndagqiba ekubeni ndinike abafundi bam ixesha elingakumbi. Ekuhlaziyweni ngokubanzi, izimemo kwiisemina, ndifumene ukuwa kwangempela ukuba ndithumela ngaphezu kwesinye kwiiveki ezimbini kubo bonke kodwa i-niche eqinile.
Ndingathanda ukwazi ukuba abanye bafumana ntoni ukubasebenzela.